တောင်ပေါ်က တယောသံ – (လေး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တောင်ပေါ်က တယောသံ – (လေး)
တောင်ပေါ်က တယောသံ – (လေး)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Nov 20, 2012 in Creative Writing | 15 comments
တလောက နည်းနည်း ညစ်နေတာနဲ့ ဆက်မရေးဖြစ်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်။ ဒီအတွက် ချော်တီးဘာ။ ခုလည်း ရေးထားတာလေး တင်လိုက်ဘာဒယ်။ နည်းသည် များသည် မဟူ အားပေးဒေါ် မူဂျဘာအုံးလို့။ အဟီးးးးး
အူးလေးကလဲ သိပ်အချိန်ဆွဲတာဘဲ။ ;)
Mon Kit နဲ့ မရွှေအိ ကို ကျေးဇူး တင်ရှိဘာအိ ..
အချိန်ဆွဲဒယ်လို့ဒေါ့ မမှတ်စေလိုဘာဂျောင်း …
ကျနော့်ရဲ့ ချစ်သော ရွာသူားတွေအတွက်
ပီးဒလောက် တင်ပေးချင်း ဖစ်ဘာဂျောင်း …
နောက်တစ်ပိုင်းတွင် အဆုံးသတ်တော့မည် ဖြစ်ပါဂျောင်း ……။
အဲဒီနှစ်ယောက် အထီးလား အမလားကွဲ့ 
ချစ်သူနှစ်ယောက်ချိန်းပြီး တောင်ပေါ်မှာ တယောလေးနဲ့ သာယာနေကြတာဖြစ်မှာပါ….
ဇာတ်သိမ်းပိုင်း မျှော်နေတယ် မြန်မြန်နော်….
တောတိုးချဲ့မမြဲ
ရောခိုးကွဲ့အမဲ
အပိုင်း ၃ နဲ့ ၄ ကြား အတော်ကြာလို့ မေ့သွားပြီး ၃ ကို ပြန်ဖတ်လိုက်ရတယ် မောင်အံစာ။
နောက်တစ်ခေါက်က ဇာတ်သိမ်းပြီဆိုရင်တော့ တယောသံရှင် သိရပြီပေါ့။
ကျနော့်ရဲ့ ပို့စ်လေးမှာ လာရောက်ကာ
အားပေးသွားကြသူအပေါင်းအား ကျနော်မှ ..
မြေကမ္ဘာ သွေမကွာ စေတနာ ကုဋေကုဋာဖြင့် ကျေးဇူးမဟာ တင်မိကြောင်းရယ်ပါ ….
လေရဟတ်တွေက မည်တဲ့  အသံပဲဖြစ်ရမယ်
နေ့ ဘက်တွေမှာအသံတွေဆူတော့ မကြားရပဲ ညဖက်မှ
တိတ်ဆိတ်နေတော့အသံထွက်ပေမပေါ့ 
ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ ဖူးလို့ ပါ …..
မောင်အံစာ ရေးလိုက်မှဖြင့် လှို့ဝှက်သဲဖို ဇာတ်လမ်းတွေချည်းပဲ။
ကြည့်ရတာ စာရေးသူကိုယ်တိုင်လည်း သတ္တိခဲ ဖြစ်ပုံရတယ်။
ဇာတ်သိမ်းလို့ရေးမှ တစ်ခါထဲ ပေါင်းဖတ်လိုက်မယ်လို့ စိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့် ပို့စ်တင်ထားတာမြင်တော့ မဖတ်ပဲမနေနိုင်လို့ ဖတ်သွားပါတယ် …
သဲထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်လမ်းလေးမို့ သိချင်စိတ်နဲ့ ဇာတ်သိမ်းကို မျှော်နေပါတယ် …